LandViewer - Ngoku ukufumana utshintsho kusebenza kwi-browser-Geofumadas
LandViewer - Ngoku ukufumana utshintsho kusebenza kwi-browser
NgoJuni, 2019 Geospatial - GIS, ezintsha
Ukusetyenziswa okubaluleke kakhulu kwedata ekude ekuboneni kuye kwaba ukuthelekiswa kwemifanekiso evela kwindawo ethile, kuthathwa ngamaxesha ahlukeneyo ukuchonga utshintsho olwenzeke apha. Ngenani elikhulu lemifanekiso ye-satellites okwangoku ekusebenziseni okuvulekileyo, ngaphezu kwexesha elide elide, ukufunyanwa kwimiqulu yezithquba kuya kuthatha ixesha elide kwaye kunokwenzeka ukuba kungabonakali. I-EOS Data Analytics idale ithuluzi elizenzekelayo ukufumana utshintsho kwimveliso yayo ye-flag, i-LandViewer, ephakathi kwezinto ezininzi ezinokukwazi ukufumana uphando nokuhlalutya imifanekiso ye-satellite kwiimarike zangoku.
Ngokungafani neendlela ezibandakanya amanethiwekhi e-neural ukuchonga utshintsho kwiimpawu zangaphambili ezikhishwe, ukuguqulwa kwe-algorithm eyenziwa ngu- EOS i-USA iqhinga elisekelwe phezu pixels, nto leyo ithetha ukuba utshintsho phakathi imifanekiso ezimbini yeraster multiband, ubalwa ngokwezibalo ngokuthabatha iinqobo pixel umhla kunye pixel ye uququzelelo efanayo omnye umhla. Olu phawu utyikityo olutsha, yenzelwe zokusebenzisa le Ubhaqo ukutshintsha umsebenzi nokunika iziphumo oluchanileyo amanyathelo ezimbalwa yaye iqhezu ixesha xa kuthelekiswa ArcGIS, QGIS okanye enye processing image software ye-GIS.
Inguqulelo yokubona utshintsho. Imifanekiso yonxweme yeso sixeko saseBeyrah ikhethiweyo ukuchonga ukuphuhliswa kweminyaka yamuva.
Ukufumanisa ukutshintsha kwidolophu yaseBeirut
Ububanzi obungenamkhawulo kwezicelo: ukusuka kwimihlaba ukubeka iliso kwendalo.
Enye yeenjongo eziphambili ezisungulwe yiqela le-EOS kwakufuneka kwenziwe inkqubo yokubona utshintsho olude kwiinkcukacha ezikude ezibonakalayo kwaye zilula kubantu abangenalwazi kwiinkampani ezingezizo ze-GIS. Ngesistim sokufumanisa i-LandViewer, abalimi banokukhawuleza ukuchonga iinkalo ezonakaliswe kwimimandla yazo ngesichotho, isiphepho okanye isikhukhula. Ukulawulwa kwamahlathi, ukufumana utshintsho kumfanekiso wesathelayithi, kuya kuba luncedo ekuqikelelwa kweendawo ezitshisiweyo, emva komlilo wehlathi kunye nokufumanisa ukungena ngokungekho emthethweni okanye ukuhlasela kwamahlathi. Gcina izinga kunye nobungakanani zotshintsho lwemozulu (ezifana ukunyibilika komkhenkce polar, ungcoliseko lomoya kunye namanzi, yokulahlekelwa ziindawo zokuhlala zendalo ngenxa ukunaba kweedolophu) ngumsebenzi owenziwa zizazinzulu lokusingqongileyo kunye rhoqo, kwaye ngoku ukwenza njalo kwimizuzu embalwa. Ngokufunda ukungafani phakathi kwexesha elidlulileyo kunye nelo xesha usebenzisa iminyaka yedatha ye-satellite kunye ne-LandViewer yokutshintshwa kwezixhobo zokufumanisa, onke amashishini angakulindela utshintsho olusasa.
Iziganeko ezisetyenzisiweyo zokufumana utshintsho: umonakalo wesikhukhula kunye nokuchithwa kwamahlathi
Umfanekiso ufanele amagama anamawaka, kunye nokukwazi ukufumana utshintsho kwiimifanekiso zeSatellite LandViewer Ziyakwazi ukubonakaliswa ngokubhekiselele kwimimiselo yempilo yangempela.
Amahlathi Usenokukhusela malunga nesinye kwisithathu kwindawo zeglobal shwaka ngesantya esothusayo, ikakhulu ngenxa yokuba imisebenzi yabantu ezifana nezolimo, imigodi, amadlelo imfuyo, ukugawulwa kunye nezinto zendalo ezifana imililo ihlathi. Kunokuba ukwenza izifundo omkhulu kumhlaba amawaka eka ehlathini, technician ihlathi nga esweni rhoqo ukhuseleko amahlathi kunye iperi imifanekiso yesatellite kunye Ubhaqo utshintsho oluzenzekelayo zisekelwe NDVI (Izihluma Index Umahluko nganye) .
Usebenza njani? I-NDVI iyindlela eyaziwayo yokujonga impilo yemifuno. Ngokuthelekisa satellite ifoto zehlathi lomelele, kunye nomfanekiso safunyanwa nje emva kokuba imithi wagawulwa, LandViewer ukubona utshintsho usike umfanekiso umahluko ebalaselisa iingongoma kwamahlathi, abasebenzisi ungalayisha iziphumo .jpg, .png okanye .fomathi yohlobo. Ikhuselo lehlathi eliya kuhlala liza kuba nexabiso elifanelekileyo, ngelixa iindawo ezicacileyo ziza kuba nezimbi kwaye ziya kuboniswa kwiitoni ezibomvu ezibonisa ukuba akukho zityalo ezikhoyo.
Umfanekiso ohlukileyo obonisa ubungakanani behlathi kwiMadagascar phakathi kwe-2016 ne-2018; zenziwe kwiimifanekiso ezimbini zeStinel-2
Olunye uphawulo olusasazekayo ukufunyanwa kweenguqu luya kuba kukuvavanya komonakalo wezolimo, owona mdla kakhulu kumafama nakwiinkampani zomshuwalense. Ngalinye ixesha xa izikhukhula zithatha umthwalo onzima ekuvuneni kwabo, umonakalo ungabonakaliswa kwaye ulinganiswe ngokukhawuleza ngoncedo lwe-NDVI-based based change detection algorithms.
Iziphumo zenguquko ye-Sentinel-2 ukutshintshwa kwendawo: iindawo ezibomvu kunye nee-orange zimelela inxalenye yentsimi; Iindawo ezijikelezayo ziluhlaza, oko kuthetha ukuthintela umonakalo. Umkhukula waseCalifornia, ngoFebruwari we-2017.
Indlela yokufezekisa utshintsho kwi-LandViewer
Zimbini iindlela zokuqalisa isixhobo kwaye uqalise ukufumana umahluko kwimifanekiso yesatellite enamacala amaninzi: ngokunqakraza kwi-icon efanelekileyo yemenyu "Izixhobo Zokuhlalutya" okanye kwisilayidi Sothelekiso, nayiphi na efanelekileyo. Okwangoku, ukujonga okuguqulwayo kwenziwa kuphela kwidatha ye-satellite engabonakaliyo Ukongezwa kwee-algorithms zedatha yokuziva kude okucwangcisiweyo kuhlonyelwe uhlaziyo lwexesha elizayo.
Ukufumana iinkcukacha ezingakumbi, funda esi sikhokelo esivela kuyo utshintshe isixhobo sokufumanisa LandViewer. O qalisa ukuphonononga amandla okwakutshanje LandViewer ngokwakho
Ukuqwalaselwa komhlaba Umbukeli womhlaba izixhobo ezikude I-Sentinel-2
Post edlulileyo«Edlulileyo Ikhosi ye-AutoCAD yama-Free-online
Post Next Iindaba ze-HEXAGON 2019Okulandelayo "
Zonke iikhosiIzifundo ze-ArcGISIikhosi ze-BIM zoLwakhiwoIikhosi zeLizwe 3DIikhosi ze-Electronicschanics ze-BIMIikhosi zeBIM zoBumeIzifundo ze-ETABSIikhosi zokuhlaziyaIikhosi ze-QGIS
#BIM-Kugqitywe ikhosi yendlela ye-BIM
Kule khosi sele ihambile ndikubonisa inyathelo ngesinyathelo indlela yokusebenzisa indlela ye-BIM kwiiprojekthi nakwimibutho. Kubandakanya iimodyuli ...
#BIM - Ikhosi yokuHlaziya ye-Autodesk - kulula
Ngokulula njengokubona ingcali iphuhlisa ikhaya-ichazwe inyathelo ngenyathelo Funda ukuVuselelwa kweDeski ngendlela elula ....
#BIM-Ikhosi yoYilo yoLwakhiwo isebenzisa iSakhiwo seRobhothi yeVenkile
Isikhokelo esipheleleyo sokusetyenziswa kohlalutyo lweRobhothi ukulungiselela imodeli, ukubalwa kunye nokuyilwa kwekhonkrithi kunye nezakhiwo zensimbi ...
Uhlobo lwe-2.5D lokubonisa iimpawu ezininzi
I-Photographmetry ye-UAV kunye neemephu ezisisiseko kunye neLIDAR
Eyona ndlela i-drones ye-GIS
Ulungelelwaniso oluhle lomboniso we-pixel
Copyright © 2020 nina egeomates
Iiyure ezingama-32 zevidiyo- 100% ekwi-intanethi
Funda i-ArcGIS Pro - Easy
Ngolwimi lwakho - 100% inthanethi